Shujaat Bukhari, mpanao gazety Kashmirita maty voatifitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jona 2018 5:21 GMT
Vakio amin'ny teny English, ਪੰਜਾਬੀ, Español, Swahili, Ελληνικά, русский, Français, English
Maty nisy nitifitra tao Srinagar, renivohitra asara an'i Jammu sy Kashmir i Shujaat Bukhari, tonian'ny gazety Kashmirita mivoaka isan'andro miteny anglisy antsoina hoe Rising Kashmir, fahafatesana niteraka fahatairana nanerana ny faritra.
Efa navitrika hatramin'ny taona 1989 ny fihetsiketsehana hitakiana ny fahaleovantena na ny Azadi sy ny fizakan-tena ara-politika ao amin'ny Lemak'i Kashmir ka tsy mitsahatra ny iparitahan'ny miaramila indiana hatrany i Jammu sy i Kashmir ka eo ambanin'ny sata toy ny Lalàm-pahefana manokan'ny tafika mitam-piadiana sy ny Lalànan'ny filaminam-bahoaka. Efa nametraka tamin'ny fomba ofisialy ny governemanta indiana fa heveriny ho ao anatin'i India tanteraka i Jammu sy i Kashmir iray manontolo.
Naneho ny hatairany ny Klioban-gazety ao India ary ankona tamin'ny zava-nitranga tao amin'ny lemak'i Kashmir.
Namoaka fanambaràna ny Fikambanan'ny tonian'i India:
Antso ho an'i @MehboobaMufti hiantoka ny fanadihadiana
Araka ny lazain'ny Mpanangom-Baovao Tsy Voasakan-Tsisitany, afa-nandositra fikasana hamono nataon'olona mitam-piadiana i Shujaat Bukhari tamin'ny jona 2006. Nolazain'i Shujaat Bukhari tamin'ny Mpanangom-Baovao Tsy Voasakan-Tsisitany (RSF) fa “Tsy azo fantarina mihitsy ara-virtoaly izay fahavalontsika sy izay namantsika”